Fortnite | အမည် သို့မဟုတ် အမည်ဝှက်ကို ပြောင်းလဲနည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 27/11/2021 16:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/11/2021 16:07 | အင်တာနက်ကို
Fortnite ၏ Battle Royale မုဒ်တွင်၊ ရုပ်ပုံသည် ကြီးမားသောအလေးချိန်ကို သယ်ဆောင်သည်။ ကစားသမားရဲ့ စတိုင်နဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက သူတကယ် အောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့ အရေအတွက်နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းနဲ့ကစားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ဂိမ်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ လူတိုင်းရယ်မောစေမယ့် နာမည်မိုက်တစ်လုံးရှိရင် အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ သိခြင်း၏အရေးကြီးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်သည့်အချိန်အခါဖြစ်သည်။ Fortnite မှာ သင့်နာမည်ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော Fortnite တွင် နာမည်တစ်ခုရှိခြင်းသည် အသေးအဖွဲကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းသည် အပြစ်မဟုတ်ပါ။ နှစ်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရသာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံသည် ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Fortnite ကို စတင်ကစားစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့သော အဆိုပါအမည်ပြောင်သည် ရယ်စရာ သို့မဟုတ် သင့်လျော်ပုံမပေါ်တော့ပါ။ သို့တည်းမဟုတ် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူကို ထိုနည်းအတိုင်းထင်ဟပ်နေခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း Fortnite တွင် သင့်အမည်ကိုပြောင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများသည် အလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကြည့်ရအောင်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤနည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PlayStation၊ Xbox သို့မဟုတ် Switch gamertag ကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တွင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Epic Games အကောင့်နှင့်သာ သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Fortnite ကို ကွန်ဆိုးလ်များပေါ်တွင် ကစားသည့်အခါ ထိုအမည်များကို ကျော်လိုပါက၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အပြည့်အဝ Epic Games အကောင့်သို့ ရွှေ့ရန်ဖြစ်သည်။
1 Fortnite တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ nick ကိုပြောင်းပါ။
1.1 Xbox တွင်
1.2 PS4 တွင်
2 Fortnite အမည် ကန့်သတ်ချက်
3 Fortnite တွင် အကောင်းဆုံးကစားသမားအမည်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
4 Fortnite ကို အမည်မသိမုဒ်တွင် ကစားပါ။
Fortnite တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ nick ကိုပြောင်းပါ။
Fortnite တွင် နာမည်ပြောင်းနည်း
PC ဒါမှမဟုတ် Mac သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Fortnite တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အမည် သို့မဟုတ် အမည်ပြောင်ကို ပြောင်းပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Epic Games အကောင့်တွင် အမည်ကို ဦးစွာပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြသည်-
ပထမဆုံးအနေနဲ့ web browser ကိုဖွင့်ပြီး လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Epic Games အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်ပါ။ (အဲလို မလုပ်ရသေးရင်)။
ပြီးရင် ငါတို့သွားမယ်။ အကောင့်အချက်အလက် စာမျက်နှာကလစ်နှိပ်ပေးသော၊ အပြာရောင်ခဲတံအိုင်ကွန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမကိုမှလာမယ့်။
ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည်အသစ်ကို ထည့်သွင်းပြီး အတည်ပြုရန် အကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အပြာရောင်ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အတည်ပြု.
ဤနည်းလမ်းသည် Nintend Switch အတွက် Fortnite ရှိ ကစားသမားအမည်ကို ပြောင်းလဲရန်အတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဤကွန်ဆိုးလ်အသုံးပြုသူများအတွက်၊ ပြသထားသောအမည်များသည် Epic Games အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ console ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ nick ကိုပြောင်းရန်၊ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
Controller တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုဖိထားပါ။ Xbox ခလုတ်။
ထိုအခါငါတို့လိမ့်မည် "ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် စနစ်"ရှိပြီးသား Gamertag ကိုရွေးချယ်သည့်နေရာတွင်
ရွေးချယ်မှုတွင် "ငါ့ပရိုဖိုင်" ငါတို့ရွေး "ပရိုဖိုင်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ"။
ထိုအခါ tab ကိုအတွက် "Gamertag အသစ်ကို ရွေးပါ"ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော Gamertag အသစ်ကို ရေးပြီး ၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းကိုအခြားကစားသမားမှအသုံးမပြုကြောင်းသေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
Xbox လိုပဲ၊ Play Station က4၎င်းသည် ဂိမ်း၏အသုံးပြုသူအမည်အဖြစ် PSN အမည်ကို အခြေခံထားသည်။ Fortnite မှာ ပြောင်းချင်ရင်၊ PSN နာမည်ကို ပြောင်းရပါမယ်။ သင်ပြုလုပ်ပုံမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်-
PS4 ပင်မစာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သို့သွားပါ။ "ချိန်ညှိခြင်း" ။
ပြီးရင် ငါတို့ရွေးတယ်။ "အကောင့်သတင်းအချက်အလက်" ။
အောက်ကိုဆင်းပြီး ငါတို့ရွေးတယ်။ "ကိုယ်ရေးအကျဉ်း"
အွန်လိုင်း ID တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ကလစ်နှိပ်ပါ။ "ကျွန်တော်သဘောတူသည်" ပေါ်လာတဲ့ window ထဲမှာ (*)။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံအသစ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ PS4 သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အကြံပြုချက်အချို့ကို ကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှိပ်ပါ။ "အတည်ပြုပါ" ။
(*) ဤအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PSN အကောင့်တစ်ခုလုံး၏ အမည်ကို ပြောင်းလဲနေကြောင်း သိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ID နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားဂိမ်းများ၏ မှတ်တမ်းများကို ဖျက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒါကို သဘောတူရင် 'Continue' ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Fortnite အမည် ကန့်သတ်ချက်
Fortnite ကစားသမားတွေက လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုသူအမည်များကို ၎င်းတို့အလိုအတိုင်း ပြောင်းလဲပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ ကန့်သတ်ချက်များ မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီသည် ပါဝင်သူများအား ကျွန်ုပ်တို့အား ငွေအကုန်ကျမခံဘဲ အကန့်အသတ်မရှိနီးပါး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အမည်များကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုသည်ဟု သင်ပြောနိုင်သည်။ V-Bucks သုံးဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ဂိမ်း၏တရားဝင်ငွေကြေး။
သို့သော်၊ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်- Fortnite တွင် သင့်အမည် သို့မဟုတ် ကုဒ်နံပါတ်ကို နေ့တိုင်းမပြောင်းနိုင်ပါ (၎င်းကို အလွန်အကြံပြုလိုမည်မဟုတ်ပါ)။ သာ အမည်အသစ်ကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဤကန့်သတ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် သက်တောင့်သက်သာခံစားရမည့် နာမည်များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မထင်မှတ်ထားသလောက် နာမည်ကို စာစီစာကုံးဖြင့် မတော်တဆ ရိုက်ထည့်မိခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ထင်ထားသလောက် ရွေးချယ်ထားသော အမည်ကို မကြိုက်ပါက၊ ထွက်လမ်းရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Fortnite သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသုံးပြုသူအမည်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်အထိ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာ အော့ဖ်လိုင်းမုဒ်တွင် ကစားနိုင်သည်။
Fortnite တွင် အကောင်းဆုံးကစားသမားအမည်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
မှန်ပါတယ်- Fortnite ကစားတဲ့အခါ၊ နာမည်ပြောင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာမည်ရင်းလိုပဲ အရေးကြီးတယ်။ ဤအမည်ပြောင်သည် ပကတိကမ္ဘာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွဲခြားသိမြင်စေပြီး အခြားကစားသမားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ သို့သော် ပြီးပြည့်စုံသောအမည်ကိုရှာဖွေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့ရက်များပင်။
ကံကောင်းချင်တော့လည်း ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် စံနမူနာကိုရှာတွေ့ရန် ကူညီပေးသည့်ကိရိယာများ။ တစ်ခုဖြစ်ပါသည် convertordeletras.netကျွန်ုပ်တို့၏ပထမနှင့် နောက်ဆုံးအမည်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရသာပေါ်အခြေခံ၍ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းစွာကျပန်းအားဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရန် မတူညီသောစနစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ "လက်ခံသည်" ခလုတ်ကိုမနှိပ်မီ၊ အကောင့်အချို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအကြံပြုချက်များ နာမည်ပြောင်များအကြောင်း
အားလုံးကတော့ အထူးအက္ခရာများ Fortnite တွင် ခွင့်ပြုထားသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အရိုးရှင်းဆုံး ဖော်မြူလာက အကောင်းဆုံးပါ။. ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်စာလုံးများပါသော anagram တစ်ခု။
ပိုကောင်းတယ် ရွေးချယ်ထားသော အမည်ပြောင်သည် အသံထွက်နှင့် ရေးသားရန် လွယ်ကူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။. မှတ်သားရလွယ်ကူသော အမည်သည် သင့်ရန်သူများအတွက်သာမက သင့်မဟာမိတ်များအတွက်ပါ အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
El နံပါတ်များအသုံးပြုခြင်း။ မဆိုးပေမယ့်လည်း ရိုးရှင်းလွန်းပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fortnite ကို အမည်မသိမုဒ်တွင် ကစားပါ။
Fortnite တွင် အမည်မသိဂိမ်းမုဒ်ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော်တို့ ပြောရမယ့် ရွေးစရာတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။: Fortnite ကို မှတ်မိနိုင်သော အမည် သို့မဟုတ် နာမည်ပြောင်မပါဘဲ မည်သို့ကစားမည်နည်း။ အမည်မသိမုဒ် Fortnite ကို ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အတိအကျ ဖန်တီးထားသည်- ထုတ်လွှင့်သူများနှင့် အခြားကစားသမားများ၏ လျှို့ဝှက်ရေးလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရန်။ ဤမုဒ်ကို အသက်သွင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထောက်အထားများကို ဖုံးကွယ်ကာ ကစားနိုင်ပါသည်။ အခြားကစားသမားများ၏အမြင်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်သည် "Anonymous" ဟုရိုးရှင်းစွာပေါ်လာလိမ့်မည်။
Fortnite တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအမည်ကို ဝှက်ထားရန်၊ ဤအရာများဖြစ်သည်။ လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများ:
ပထမဦးစွာ သင်သည် ဂိမ်း၏ Settings menu သို့သွားရပါမည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Anonymous mode ၏ လိုချင်သော ရွေးချယ်မှုများကို ဖွင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသည့်အရာမှာ ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအမည်ကို အခြားကစားသမားများထံမှ ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန်အတွက်၊ «ဆက်တင်များ» မီနူးသို့ ပြန်သွားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်ကို ထပ်မံမြင်နိုင်စေမည့် အမည်ဝှက်မုဒ်ရွေးချယ်မှုများကို ပိတ်လိုက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » Fortnite ၏အမည် သို့မဟုတ် အမည်ကို မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။
DNS ဆာဗာသည် Windows 10 တွင် တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ- ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။